Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पाकिस्तानसँगको एकदिवसीय क्रिकेट न्युजिल्याण्डले जित्यो – Emountain TV
पाकिस्तानसँगको एकदिवसीय क्रिकेट न्युजिल्याण्डले जित्यो
एजेन्सी, २९ पुस । पाकिस्तानसँगको एकदिवसीय क्रिकेट शृंखला न्युजिल्याण्डले जितेको छ । शनिबार भ्रमणकारी टोली न्यूजिल्याण्डले पाकिस्तानको दुनेदिन स्टेडियममा तेश्रो खेल १ सय ८३ रनले जितेसँगै शृङ्खला हात पारेको हो ।
२ सय ५८ रनको लक्ष्य पाएको पाकिस्तान २७ ओभर २ बलमा ७४ रनमा अलआउट भयो । न्युजिल्याण्डको जितमा ट्रेन्ट बोल्टले ५ विकेट लिए । पाकिस्तानका चारजनाबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
उसका लागि सर्फराज हमदको नटआउट १४ रन सबैभन्दा धेरै रन बन्यो । पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्याण्डले रोश टेलरको ५२ तथा मार्टिन गुप्टिलको ४५ रनको मद्दतमा २ सय ५७ रन बनाएको थियो ।
पाकिस्तानका रुम्मन राइस र हसन अलीले तीन तीन विकेट लिए । पाकिस्तानले न्युजिल्याण्डसँग ५ एकदिवसीय र तीन ट्वेन्टी–ट्वेन्टी क्रिकेट खेल्नेछ ।